कोसँग युद्ध गर्दैछ चीन ? सेनालाई तयार रहन निर्देशन — Paschimnews.com News From Nepal
कोसँग युद्ध गर्दैछ चीन ? सेनालाई तयार रहन निर्देशन
चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले देश अहिले संकटको सामना गरिरहेको र पिपुल्स लिबरेसन आर्मी (पीएलए)लाई युद्धको लागि तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएका छन् ।
गएको शुक्रबार सेन्ट्रल मिलिटरी कमिसन(सीएमसी)को बैठकमा बोल्दै चिनियाँ राष्ट्रपतिले सो कुरा बताएपछि त्यसको विश्वभरी नै चर्चा भएको छ । उनले चीन कस्तो खालको संकटमा परेको हो र किन उनले सेनालाई युद्धका लागि तयार रहन निर्देशन दिए भन्ने कुरा चाहिँ खुलेको छैन ।
चीनको सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्समा शनिबार प्रकाशित समाचार अनुसार चिनियाँ राष्ट्रपतिले भनेका थिए,“विश्वमा यस्तो बदलाव भइरहेको छ कि जुन गएको एक शताब्दीमा पनि भएको थिएन । र, चीन उस्तै अवस्थामा रहेको छ ।
उसका लागि विकासको रणनीतिक अवसर महत्वपूर्ण हो ।” उनले सैनिकका लागि आवश्यक तालिमको लागि एक आदेशमा पनि उक्त अवसरमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सबै सैनिक टुकडीले राष्ट्रलाई परिरहेको खतरा र विकासको धार दुवै पक्षलाई बुझ्नुपर्ने र जस्तो सुकै अवस्थाको सामना गर्न तयार रहनुपर्ने उक्त अवसरमा बताएका थिए ।
ग्लोबल टाइम्सले रक्षा मामिलाका विज्ञ सोंग जोंगपिंगलाई उद्धृत गर्दै जनाएअनुसार राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेको आदेशमा चीनको पिपुल्स लिब्रेसन आर्मीका सबै टुकडीलाई स्थापनाको ७० औं वर्षगाँठका अवसरमा तियानमेन स्क्वायरमा परेडका अतिरिक्त पीएलएले युद्ध क्षमताको प्रदर्शनसमेत गर्ने जनाइएको छ । उक्त परेडका अवसरमा चीनले आफ्नो सेना युद्ध जीत्नको लागि सक्षम छ भन्ने देखाउन खोजिएको छ ।
रोयटर्सका अनुसार चीन दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो उपस्थिति मात्रै होइन नियन्त्रण अझै बढाउन चाहन्छ । साथै अमेरिकासँगको व्यापार मुद्दालाई लिएर पनि तनाव भइरहेको छ । त्यसैगरी ताइवानसँग समेत चीनको अहिलेको सम्बन्ध तनावग्रस्त रहँदै आएको छ । चीन र अमेरिका अहिले विश्वका सबैभन्दा ठूला अर्थतन्त्र हुन् ।
यी दुई मुलुक अहिले बजारको लागि परोक्ष लडार्इंमा छन् । त्यसलाई विश्वव्यापी रुपमा अहिले ‘टे«ड वार’ भनिदै आएको छ । दुवैले एक अर्का देशबाट हुने आयातमा अतिरिक्त कर लगाइरहेका छन् ।
चिनिया राष्ट्रपतिले बैठकमा भनेका थिए,“आपतकालीन अवस्थामा सेना तयारी अवस्थामा रहनु पर्दछ । हामीले साझा अभियानको क्षमतापनि बढाउनु पर्छ र युद्धका नयाँ तरिकाको लागि पनि तयार रहनु जरुरी छ ।”
यसभन्दा अघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘एशिया रिएस्युरेन्स इनिसिएटिभ एक्ट’लाई स्वीकृत गरेर कानुनी रुप दिएका थिए ।
विश्वको करिब आधा मानिस बस्ने एशिया प्रशान्त क्षेत्रको लागि बनाइएको यो कानुनका अनुसार दक्षिण चीन सागरमा चीनको निर्माण कार्य र उसको सेनाको उपस्थितिलाई अमेरिकाले आफ्नो राष्ट्रिय हित तथा यो क्षेत्र र विश्वव्यापी स्थायित्वको समेत विरुद्धमा रहेको जनाएको छ ।
यस अघि गएको बुधबार मात्रै पनि चीनका राष्ट्रपतिले ताइवान चीनसँग एकीकृत हुनुपर्ने र भएरै छोड्ने बताएका थिए । उनले त्यसका लागि बल प्रयोग गर्नसमेत सकिने चेतावनी दिएका थिए । ताइवानसँग सम्बन्ध सुधारका लागि ४० वर्ष पुगेको अवसरमा दिएको मन्तव्यमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले चीन ‘एक देश दुई प्रणाली’को रुपमा ताइवानलाई शान्तिपूर्ण एकीकरण गर्न चाहेको बताएका थिए ।
गएको साता केही अमेरिकी नागरिक चीनमा पक्राउ परेको बताइएको छ । त्यही भएर अमेरिकी विदेश मन्त्रालयलले चीन जाँदा होशियार रहन आफ्ना नागरिकलाई सचेत गराउँदै ‘ट्राभल एडभाइजरी’ जारी गरेको थियो । सी सन् २०१२ मा चीनको राष्ट्रपति र सेन्ट्रल मिलिटरी कमिसनको चेयरम्यान बनेका हुन् ।
त्यसपछि उनले पीएलएलाई अझै मजबुत बनाउने प्रयास गरेका छन् । उनी सत्तामा आएपछि चीन विश्वमामिलामा तीब्रताका साथ अघि बढीरहेको पाइएको छ । (एजेन्सी)
तान्त्रिकसँग यौन सम्बन्ध राख्न नमान्दा श्रीमतीको हत्या